इबोला भाइरसको आतंक – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
इबोला भाइरसको आतंक
२०७१ श्रावण २९, बिहीबार ०२:३१ गते
एउटा विश्वप्रसिद्ध भनाइ छ, “दिन सबैको बिग्रिन्छ, तर विचारका गरिबहरुको दिनचाहिँ सधैँभरि बिग्रिन्छ ।” यो भनाइ अरु देशका मान्छेहरुमा के–कति लागू हुन्छ, थाहा छैन तर हाम्रो देश जो सबै कुरामा धनी भए पनि शुद्ध विचारका कोणबाट कंगाल भन्नुपर्छ, यो देशको हकमा भने सोह्रै आना लागू हुने अवस्था देखिएको छ । सीधा भन्नुपर्दा सबै नामका साँढेसातका दशाहरु यही देशमा थुप्रिन्छन् । सबैभन्दा डरलाग्दो र ताजा दशाका रुपमा सिन्धुपाल्चोकको पहिरो देखा परेको छ जसले कम्तीमा २ सय नेपालीको ज्यान निलेको छ भने हजारौँलाई पीडादायी ढंगले विस्थापित तुल्याएको छ ।
नेपाललाई दशारुपी राष्ट्रिय रोगहरुले सताउन थालेको धेरै भयो । सत्ता प्राप्त गर्नका लागि जे पनि गर्ने, गर्न हुने गर्ने र गर्न नहुने पनि गर्ने, इमान बेचेर धन कमाउन जे पनि गर्ने आदि इत्यादि त नेपाली मनभित्रका सदाबहार रोगहरु भए नै, शरीरमा लाग्ने झाडापखाला, आउँ, रूघाखोकी, ज्वरोले लामो समयअघिदेखि सताएको सतायै
छन् । हामी नेपाली यी हेर्दा सामान्य लाग्ने खालका राष्ट्रिय रोगहरुबाट सताइएका छौँ, लामो समयअघिदेखि । पछिल्ला दिनहरुमा मुटुरोग, मृगौला रोग, ब्लड प्रेसर र मधुमेहजस्ता प्राणघातक रोगहरुले घप्लक्कै नेपाली जनतालाई छोपेको छ । यी रोगका साथमा ब्लड क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर र महिलाहरुमा पाठेघरको क्यान्सरजस्ता भयानक रोगहरु देखा परेका छन् । यी रोगहरुका कारण नै हजारौँहजारको संख्यामा नेपाली जनताको मृत्यु भएको छ । मुलुकभित्रै देखा परेका र यहीँ उत्पन्न भएका रोगहरुलाई राष्ट्रिय समस्या वा राष्ट्रिय रोगभन्दा फरक पर्दैन ।
माथि उल्लेखित रोगहरुलाई छाडेर बाहिरी मुलुकबाट नेपाल आउने रोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय रोग भन्न उपयुक्त हुन्छ । नेपालीलाई आन्तरिक वा राष्ट्रिय रोगसँग लड्न नै धौधौ परिरहेका बखत अन्तर्राष्ट्रिय रोगहरुले समेत समस्यामा पार्न थाले । सन् १९८२ ताका दुनियाँभरिका देशहरुमध्ये कुनै एक देशमा एचआईभी एड्स देखा प¥यो । चिम्पान्जीको संसर्गबाट मानवमा सरेको बताइएको यो रोग हावाको गति झैँ विकसित तथा अविकसित सबै मुलुकमा फैलियो । यसले लाखौँको संख्यामा मान्छे मा¥यो भने यही रोगले नेपाली जनसंख्या घटाउने कामसमेत ग¥यो । प्राणघातक एड्स रोगले नेपाली धनी, गरिब, यो जात, त्यो जात, यो धर्म, त्यो धर्म भन्ने कुरा थिएन । शरीरमा रगत भएका नेपालीहरु जो–जो एड्स रोग सर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत छिरे, तिनीहरु तड्पी–तड्पी मरे । अहिले पनि यो रोगले संसारलाई गाँजेको छ । नेपाललाई पनि गाँजेकै छ ।
एक समयमा अन्तर्राष्ट्रिय रोगका रुपमा बर्ड फ्लु देखा प¥यो । “चराको रूघा” भनिने यो बर्ड फ्लु दुनियाँको कुनै कुनामा देखा प¥यो र हावाको माध्यमबाट एउटा चरा हुँदै अर्को चरामा सर्दै गयो । यो रोग संसारमा फैलियो । यसले दुनियाँमा केही मान्छे पनि मा¥यो । नेपालमा यो रोगले धनको क्षति ग¥यो, तर मान्छेको क्षति भने भएन । यो अन्तर्राष्ट्रिय रोग प्रायः एक–दुई वर्ष बिराएर देखा पर्ने गरेको छ । जहिले देखा पर्छ, त्यसैबेला मान्छे नै नमारे पनि चराचुरूंगी र कुखुरा मारेर आर्थिक डामाडोल भने पारेकै छ ।
अर्को अन्तर्राष्ट्रिय रोग पनि नेपालीलाई थला पार्ने हिसाबले आउने गरेको छ । स्वाइन फ्लुका नामले चिनिने त्यो रोगले पनि नेपालमा केही वर्षअघिदेखि हाहाकारको स्थिति सिर्जना गरेको छ । सुँगुरको शरीरमा सबैभन्दा पहिले देखा परेको भनिएको यो रोगले दुनियाँका मानवजातिलाई दुःख दिएको छ, नेपाली जनता त झनै आतंकित हुने गरेका छन् । भारतबाट नेपालतर्फ हुत्तिएको डेंगु रोगले नेपालमा केही मान्छे मारिसकेको छ भने केही वर्षअघिदेखि यो रोग प्रत्येक वर्ष महामारीका रुपमा देखा परेको छ । नेपालमा पुरानो जमानादेखि नेपालीलाई दुःख दिइरहेका राष्ट्रिय रोगहरुलाई हामीले पूर्ण रुपले पराजित गर्न सकेकै थिएनौँ, हाम्रो करङै खुस्काउने किसिमले एड्स आयो । यहीँ छ, त्यो कतै गएको
छैन । बर्ड फ्लु आयो, त्यो पनि यहीँ छ । वर्ष, दुई वर्षमा टाउको निकालेर कुखुराको खोरतिर देखा पर्छ र हाम्रो मुटु हल्लाउँछ । स्वाइन फ्लु पनि हराएको छैन, यतैकतै लुकेर बसेको छ । त्यो कुनबेला देखा पर्छ, केही ठेगान छैन ।
कुल मिलाएर हामी बुद्धि, राजनीति र कूटनीतिमा गरिब सावित नेपालीहरु यस्तैयस्तै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रोगहरुबाट शारीरिक र मानसिक रुपमा थला परिरहेकै अवस्थामा अहिले फेरि इबोला नामको भाइरस जो चमेरोको शरीरबाट फैलिएको बताइएको छ, त्यसले हामीलाई “रातमा निद्रा न दिनमा भोक”को अवस्थामा पु¥याएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा खसेको पहिरोले गाउँका गाउँ सखाप पारेर हाम्रा नेपाली दाजुभाइ र दिदीबहिनीको बिचल्ली भएर एक प्रकारले शोकमा डुबेको अवस्थामा इबोला भाइरस नेपाल प्रवेश गरेर नेपालीलाई मार्ला भन्ने डरले नेपाली जनता निकै आतंकित भएका छन् ।
झन्डै चालीस वर्षअघि देखा परेको इबोला भाइरस यसपटक अफ्रिकी मुलुकबाट फैलियो । सुरूमा एक–दुई वर्षका बालकमा देखा परेको इबोला भाइरसले त्यो बालकलाई मारेपछि त्यही भाइरसकै कारण उनलाई स्याहार गर्ने आमाको मृत्यु भयो । उनकी आमाको उपचारमा संलग्न नर्स त्यही कारणबाट मरिन् । नर्सको सम्पर्कमा रहेका उनका परिवारका सदस्य मारिएपछि तिनलाई उपचार गर्ने डाक्टरको समेत मृत्यु भयो । डाक्टरको सम्पर्कमा रहेका उनका दुई जना भाइहरु पनि इबोला भाइरसकै कारण थलिएर मारिएपछि यो भाइरस महामारीका रुपमा फैलिएको बुझियो । एक गाउँबाट अर्को गाउँ, त्यो गाउँबाट एक सहर, त्यो सहरबाट अर्को देश हुँदै अफ्रिकी मुलुकहरुमध्ये केही मुलुकमा द्रुत गतिमा “इबोला”भाइरस फैलियो र यो लेख लेख्दालेख्दै र चितवन पोष्ट दैनिकमा छापिँदाछापिँदैको अवस्थामा कुल मिलाएर १ हजार ६३ जनाको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
बेलैमा संसारका मान्छेहरु एक भई यो रोगविरूद्ध नलड्ने हो भने लाखौँलाख संसारका मानव सदस्यको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको यो रोगविरूद्ध लड्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुरोध गरिसकेको छ र यसविरूद्ध लड्न १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १० अरब नेपाली रूपैयाँ खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । “इबोला”भाइरस आफ्नो देशमा प्रवेश नगरोस् र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले विकसित मुलुकहरु अमेरिका, बेलायत र प्रायः सबै युरोपियन मुलुकहरुले भूमार्ग र हवाई मार्गबाट हुने आवतजावतमा बिरामीजस्ता लाग्ने मान्छेहरुलाई जहाँको त्यहीँ परीक्षण गर्ने र मानवबस्तीमा प्रवेश गर्न नदिने नीति अपनाइसकेका छन् । जापान, चीन, ताइवानलगायतका देशहरुले पनि होसियारी अपनाइसकेको खबर प्राप्त भएका छन् ।
तर, नेपाल हवाई यातायात र भारतसँगको खुला सिमानाका कारण इबोला भाइरसबाट प्रभावित हुन सक्ने उच्च जोखिमयुक्त मुलुक भए पनि जुन रफ्तारमा होसियारी अपनाउनुपथ्र्यो, बिरामी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले होसियारी अपनाउन सकेको छैन । नेकपा एमालेका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेका खगराज अधिकारीले ठसठस कन्दै र हाई काढ्दै भर्खरै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्लेनबाट उत्रिएकाहरुलाई स्वास्थ्य चेकजाँच गर्न दुई–चार जना स्वास्थ्य कार्यकर्ता खटाएका छन् । यसलाई घोर विडम्बना भन्नुपर्छ । मन्त्री अधिकारीले सयौँ जना यात्रु झर्ने विमानस्थलमा जम्मा दुई–चार जना उपचारकर्मी पठाएका छन् । यतिबेलै कम्तीमा एक सयको संख्यामा त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वास्थ्यकर्मी खटाउनुपथ्र्यो । खटाएरमात्रै काम लाग्दैन, शंकास्पद बिरामीहरुलाई काठमाडौँ छिर्न नदिएर विमानस्थलवरिपरि नै रोग निक्र्यौल र थप उपचारका लागि राख्ने बन्दोबस्त गरिहाल्नुपथ्र्यो ।
अब शंकास्पद बिरामीलाई सहरभित्र छिर्न कुनै पनि हालतमा दिनुहुँदैन । यदि कुनै “इबोला” संक्रमित बिरामी सहर वा सहरमा रहेको अस्पताल प्रवेश गरेमा त्यसले सयौँ होइन, हजारौँमा संक्रमण हुन सक्छ । हेर्दाहेर्दै लाखौँ नेपालीको अनाहकमा मृत्यु हुन सक्छ । यो “इबोला” भाइरस सामान्य रूघाखोकीजस्तो होइन, विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको जानकारीअनुसार यसले आक्रमण गरेपछि बिरामी बाँच्ने कुनै सम्भावना छैन । पुराना सरकारहरुले नेपाली जनताको ज्यानलाई स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सामान्य घरपालुवा जनावरजत्तिको पनि मान्यता दिएका थिएनन् । जनता मरुन् वा बाँचून्, वास्ता नगर्दै स्वास्थ्य उपचारलाई दिन दुई गुना, रात चार गुना महँगो बनाइएको थियो । यतिबेलाको सरकारले पनि पुरानो सरकारकै पाराले व्यवहार ग¥यो र “इबोला” भाइरस नियन्त्रणमा लापर्बाही ग¥यो भने त्योजत्तिको ठूलो अपराध र अन्याय अरु हुनेछैन । मन्त्री खगराज होसियार ! राजनीतिक दलहरु सावधान !!
एउटा हलीको दृष्टान्त ! [लक्ष्मणरेखा]
मध्यवर्ती क्षेत्र अतिक्रमणमा भोटको राजनीति
आमा प्रथम गुरू हुन्, काख हो पाठशाला
नेपाली कांग्रेसद्वारा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलगायतविरुद्ध आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसको आज बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले यही...
सन् २०२० मा विपद्जन्य घटनाबाट पाँच हजार बढीको मृत्यु
पार्टीको आधिकारिकता हामीसँग छ : नेपाल
नेपालमा कोरोनाबाट थप ३०३ सङ्क्रमित, २८५ जना निको
चितवन पोष्टकर्मी खनालसहित पाँच जनालाई पुरस्कृत गरिने